यी हुन् विश्वका १५ उत्कृष्ट कार कम्पनी
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, ३ असार
विश्वमा कारको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । विकसित देश मात्रै होइन, विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरुमा पनि कारको माग बढिरहेको छ ।
कार उत्पादनमा विभिन्न कम्पनी सहभागी छन् । विश्वका १५ उत्कृष्ट कार कम्पनीबारे हामीले केही जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं ।
यो कार कम्पनी सन् १९२७ को २१ जुलाईमा स्थापना भएको हो । यो कार कम्पनीको मुख्य कार्यालय जमर्नीको म्युनिखमा छ । यो कम्पनीले निर्माण गरेका हरेक प्रकारका कार संसारभर नै प्रसिद्ध छ ।
सन् २०१८ मा बीएमडब्लूले आफ्नो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८.४ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि गरेको थियो ।
७ मार्च १९१६ मा स्थापना भएको बीएमडब्लूले दैनिक १४ सय कार उत्पादन गर्छ । मोटरसाइकलसमेत उत्पादन गर्ने यो कम्पनीले वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै कार उत्पादन गर्छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार यो कम्पनीको खुद आम्दानी ७.२० बिलियन युरो छ ।
कम्पनीको उत्पादनलाई हेर्ने हो भने यो नै संसारको सबैभन्दा ठूलो कार कम्पनी हो । यो कम्पनीका कारहरु निकै महँगा हुन्छन् । बीएमडब्लूका कारहरु हेर्दा पनि निकै नै आकर्षक हुन्छन् । यो कम्पनीले विशेष गरी सुविधायुक्त कारहरु बनाउने गर्छ । कारका साैखिनहरु यो कम्पनीका कार रुचाउँछन् । यस कम्पनीको सेवा पनि उत्कृष्ट हुन्छ । यस कम्पनीका ग्राहकहरुलाई संसारभरि नै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।
फोर्ड कार कम्पनीको स्थापना सर हेनरी फोर्डले गरेका हुन् । फोर्ड कार कम्पनीको स्थापना सन् १९०३ को जुन १६ तारिखका दिन भएको हो । यस कम्पनीको मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिचिगनमा छ ।
यसको ग्राहक सेवा पनि संसारभर उपलब्ध छ । यसले संसारमा निकै उत्कृट मोडलका कारहरु उत्पादन गर्छ । यो कम्पनीले आधुनिकतम र पारम्परिक कारहरु निमार्ण गर्छ । यस कम्पनीका दुवै प्रकारका कारहरुको निकै माग छ ।
संसारका उत्कृष्टमध्येका अटोमोबाइल इन्जिनियरहरु यस कम्पनीको उत्पादनहरु तयार पार्न खटिएका हुन्छन् । यस कम्पनीको पछिल्लो ब्रान्ड २०१२ फोर्ड मुस्ताङ हो । यो कार यसको उल्लेखनीय बाहिरी र भित्री डिजाइनको आकर्षणका कारण संसारभरि निकै लोकप्रिय भएको छ ।
सन् २०१८ मा फोर्ड कम्पनीको नाफा ५० प्रतिशतले घटेको छ । २०१८ मा फोर्डले ३.७ बिलियन अमेरिकी डलर माात्रै नाफा गरेको थियो । ट्रकसमेत उत्पादन गर्ने फोर्डले सन् २००५ मा आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा महँगो कार सार्वजनिक गरेको थियो ।
फोर्डले सन् २००५ मा जीटी सुपर कारको नाम दिएर ४ लाख अमेरिकी डलर मूल्यको कार सार्वजनिक गरेको थियो ।
३. निसान मोटर
निसान मोटरको सुरुवात २६ डिसेम्बर १९३३ मा भएको हो । यसको सुरुवात जापानको योकोहोमा सहरमा भएको हो । निसानका कारको आफ्नाे छुट्टै विशेषता हुन्छ । सबै वर्गका मानिस निसानका कारहरुलाई उत्तिकै मन पराउँछन् । यसकाे डिजाइन सुन्दर र आकर्षक हुन्छ । यी कारहरु आन्तरिक रुपमा पनि निकै शक्तिशाली हुन्छन् ।
सन् १९११ मा खुलेको कवाइरसिन्सा माटर वर्क्स नै १९३३ मा निसान कम्पनी बनेको हो । यस कम्पनीले आफ्नो पहिलो कार सन् १९१४ मा बजारमा ल्याएकोे थियो । त्यसयता यसले उत्कृट श्रेणीका कैयौं कार बनाइसकेको छ । सन् १९६६ मा आएको प्रिन्स आर–३८० रेसर, १९७१ को ड्याट्सन २४० जेड, सन् २०१२ को निसान म्याक्सिमा एसभी स्पोर्ट्स निसान जीटी–आर यस कम्पनीको बेवास्ता गर्न नसकिने खालका कारहरु हुन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा उत्पादन प्लान्ट राखेको निसानले वार्षिक ५.६ मिलियन कार उत्पादन गर्ने गर्छ । निसानको सन् २०१८ को मार्च ३१ सम्मको रिर्पोटअनुसार करीब १२ लाख मिलयन जापानी यनको व्यापार गरेको छ ।
टोयोटा पनि निसानजस्तै जापानाी कार कम्पनी हो । पछिल्ला केही समययता संसारभर जापानी कार रुचाइनुमा टोयोटाको पनि निकै ठूलो योगदान छ । टोयोटाको सुरुवात २८ अगस्त १९३७ मा भएको हो । यसको मुख्य कार्यालय टोयोटा र अईची जापानमा छ ।
सन् २०१० मा टोयोटा कम्पनीले संसारभर ३ लाख २५ हजार ९ सय ५ कर्मचारीलाई जागिर दिएको थियो । यो आर्थिक आर्जनको हिसाबले संसारकै ११औं नम्बरको कम्पनी हो ।
यस कम्पनीको टोयोटा कारोला कार संसारभरि नै निकै लोकप्रिय छ । संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको कारको श्रेय पनि टोयोटालाई नै जान्छ । टोयोटाका कारहरु सस्तो, राम्रो र किफायती कारका रुपमा संसारभर नै प्रसिद्ध छन् ।
टोयटा सन् २०१२ देखि नै अत्यधिक कार उत्पादन गर्ने कम्पनीको सूचीमा अग्रणि स्थानमा छ । टोयोटाले वार्षिक १० मिलियनभन्दा धेरै कार उत्पादन गर्ने गर्छ । सन् २०१८ मा पनि टोयटाले १०.४ मिलियन कार उत्पादन गरेको थियो ।
विश्वभर लोकप्रिय रहेको टोयटाले सन् २०१८ मा ३० ट्रिलियन जापानी यनको व्यापार गरेको थियो ।
हाेन्डा २४ सेप्टेम्बर १९४८ मा सुरुवात भएको सामुदायिक कार कम्पनी हो । यसको सुरुवात साइचिरो हाेन्डाले गरेका हुन् । यसको मुख्य कार्यालय जापानको राजधानी टोकियोको मिनाटोमा छ । यो कम्पनीले परम्परागतदेखि विद्युतीय, हाइब्रिड अनि स्पोर्ट्स सबै प्रकारका कार निर्माण गर्छ । पूर्ण लक्जरी कार निर्माण गर्ने हाेन्डा जापानको पहिलो कम्पनी हो ।
सन् १९८६ मा हाेन्डा अक्युरा कार निर्माण गरेर हाेन्डाले यस्तो श्रेय पाएको हो । हाेन्डा अकोर्ड, हाेन्डा सिभिक यस कम्पनीका लाेकप्रिय कार हुन् । हाेन्डाको प्रमुख उत्पादन भने माेटरसाइकल मानिन्छन् । यस कम्पनीका मोटरसाइकल संसारभर प्रसिद्ध छन् । यस कम्पनीले कार र माेटरसाइकलका अलावा अन्य विभिन्न प्रकारका इन्जिन पनि निर्माण गर्छ ।
सन् २०१८ मा १ लाख ३८ हजार २५० मिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार गरेको होन्डाले वार्षिक ५ मिलियनभन्दा धेरै कार उत्पादन गर्ने गर्छ । होन्डाले सन् २०१८ मा मात्रै ५.२ मिलियन कार बिक्री गरेको थियो ।
क्याडिल्याक अमेरिकाको जनरल मोटर कम्पनीको एउटा हाँगो हो । यसको सुरुवात २२ अगस्त १९०२ मा भएको थियो । यसको मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिचिगनमा छ ।
क्याडिल्याक जनरल मोटर्सपछिको अमेरिकको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो कार कम्पनी हो । यस कम्पनीलाई सन् १९०९ मा जनरल मोटर्सले खरिद गरेकोे थियो । यो कम्पनीले विशेष गरी लग्जरी कार बनाउने गर्छ । यसका कार सुन्दरता र कारको चमकका लागि प्रख्यात छन् । यी कारहरुको आन्तरिक बनोट पनि निकै आकर्षक मानिन्छ ।
सन् १९१४ देखि अहिलेसम्म नै यो कम्पनीले उत्पादन गरेका कार उच्च कोटीका लग्जरी कारमा पर्छन् । क्याडिल्याक अमेरिकाको प्रमुख लग्जरी कार उत्पादक कम्पनी मानिन्छ ।
सन् २०१८ मा क्याडिल्याकको व्यापार ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१८ मा उसले करिब साढे ११ हजार कार बिक्री गरेको छ ।
ज्यागुआर कार कम्पनीको सुरुवात सन् १९२२ को सेप्टेम्बर ११ मा स्वालोसाइड कार कम्पनीका रुपमा भएको थियो । सन् १९४५ को अप्रिल ९ देखि यस कम्पनीले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी ज्यागुआर राखेको हो ।
यो कम्पनीलाई सन् १९६६ मा ब्रिटिस मोटर्स कम्पनीले खरिद गरेको थियो । यसको उत्पादनहरु ल्याडरोभर जिपहरु संसारभर निकै लोकप्रिय छन् । सन् २०१२ को डिसेम्बरदेखि यो कार कम्पनीको नाम ज्यागुआर ल्यान्ड रोभर भएको छ ।
अहिले यो कम्पनी भारतीय टाटा कम्पनीको स्वामित्वमा छ । यसका मुख्य उत्पादनहरु ल्यान्डरोभर र रेन्जरोभर जिप तथा ज्यागुआर एक्स जे, एक्स एफ, एक्स के र एक्स के आर कार हुन् ।
ज्यागुअरले सन् २०१८ मा २५.८ विलियन युरो आम्दानी गरेको छ । यो कम्पनीले सन् २०१८ मा ४ लाख ३९ हजार ७४९ ल्याड रोभर र १ लाख ७४ हजार ५६० ज्यागुअर कार उत्पादन गरेको थियो ।
सुजुकी मोटर कर्पोरेसन जापानको बहुराष्ट्रिय कार कम्पनी हो । यसको मुख्य कार्यालय हामामात्सु जापानमा छ । यसको सुरुवात सन् १९०९ मा मिचियो सुजुकीले सुजुकी लुमवर्क्सका रुपमा गरेका थिए ।
यसले सुरुवातको समयमा लुगा बुन्ने तानहरु बनाउने गर्थ्याे । यो कम्पनीले आमजनतालाई ध्यानमा राखेर साना कारहरु बनाउने गर्छ । यो कम्पनीको सबैभन्दा पहिलो कार सन् १९३७ मा आएको थियो ।
सजुकीले संसारभरि नै विभिन्न स्थानीय उद्योगसँग मिलेर कार निर्माण गर्ने गर्छ । भारतमा पनि भारतको मारुती उद्योगसँग मिलेर यसले विभिन्न प्रकारका मारुती सुजुकी कारहरु निर्माण गर्दै आएको छ । पाकिस्तानमा पनि पाक सुजुकी मोटर्स भनेर यसले आफ्नाे शाखा खोलिसकेको छ ।
सन् २०१८ मा सुजुकीले पहिलोपटक विश्वव्यापी रुपमा ३ मिलियन कार बिक्री गरेको थियो । यो कम्पनीले वार्षिक करिब ४ मिलियन उत्पादन गर्ने गरेको बताउँदै आएको छ ।
अउदी जर्मनीको कार कम्पनी हो । सयको सुरुवात सन् १९०९ को जुलाई १६ मा भएको थियो । यो कम्पनीले सानाठूला दुवै खालका सुन्दर अनि गुणस्तरीय कार उत्पादन गर्छ । सन् १९६६ यता अउदीको मुख्य स्वामित्व भक्सव्यागन कम्पनीसँग छ ।
भक्सव्यागनले अउदीको ९९ दशमलव ५५ प्रतिशत सेयर आफ्नाे नियन्त्रणमा लिएको छ । यसका पछिल्ला कारमा कम्प्युटराइज्ड नियन्त्रण प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । अउदीका मुख्य उत्पादनहरु अउदी सुपरमिनी (अउदी ए वन्), स्मल फेमेली कार (अउदी एथ्री), कम्प्याक्ट एक्जुकेटिभ कार (अउदी एफोर र ए फाइभ)लगायत हुन् । यो कम्पनीले साना कारका साथै ठूला लग्जरी कार र स्पोर्ट्स कार पनि निर्माण गर्छ ।
सन् २०१८ मा अउदीको व्यापार १४ प्रतिशतले घटेको थियो । चीन केन्द्रित व्यापार गरिरहेको यो कम्पनीले सन् २०१८ मा विश्वभर १८ लाखभन्दा धेरै कार बिक्री गर्दा चीनमा मात्रै साढे ६ लाख कार बिक्री गरेको थियो । सन् २०१८ मा यो कम्पनीले करिब १९ लाख कार उत्पादन गरेको थियो ।
यो कम्पनीको सुरुवात १८ जनवरी १९१९ मा भएको हो । यसको सुरुवात एचएम बेन्टली र डब्लूओ बेन्टलीले गरेका हुन् । यो कम्पनी केवे इंग्ल्यान्डमा छ । यो कम्पनीलाई सन् १९३१ मा अर्को प्रसिद्ध कम्पनी रोल्सरोयसले खरिद गरेको थियो । सन् १९९८ यता यस कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व भक्सव्यागनसँग छ ।
यो कम्पनीले निकै महँगा लक्जरी कार निमार्ण गर्छ । पछिल्लो समय चीन यसको प्रमुख बजार बनेको छ । यसका प्रमुख उत्पान कन्टिनेन्टल फ्लाइङ स्पर, कन्टिनेन्टल जीटी, मुल्साने आदि हुन् ।
महँगा लक्जरी कारका लागि यो कम्पनी र यसका उत्पादनहरु विश्वभरि नै लाेकप्रिय छन् ।
बेन्टलीको बजार सन् २०१८ मा घटेको छ । यो कम्पनीले सन् २०१८ मा साढे ९ हाजर कार मात्रै बिक्री गर्न सक्यो ।
११. जनरल मोटर्स
जनरल मोटर्सको सूरुवात सन् १९०८ को सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिचिगनमा भएको थियो । यसले संसारभरिका ३७ देशबाट विभिन्न ब्राण्डका कार उत्पादन गर्छ ।
यसका प्रमुख ब्राण्डहरुमा सेभ्रोले, बुईक, जीएमसी, क्याडिल्याक, बाउजोँ, होल्डन, इशुजू, जेई फाङ, ओपल, भोउक्सहल र उलिङ हुन् । यो कम्पनीले संसारका १ सय ५७ देशमा आफ्नाे उत्पादन पु¥याउँछ ।
जनरल मोटर्समा २ लाख १२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सन् १९३२ देखि २००७ सम्म लगातार ७७ वर्षसम्म यसले संसारमा सबैभन्दा बढी कार बेच्ने कम्पनीका रुपमा एक छत्र रेकर्ड कायम राखेको थियो । सन् २००९ देखि यसले स्याटर्न र पोन्टियाक ब्राण्डका गाढी उत्पान बन्द गरेको छ ।
सन् २०१८ मा ८.३८ मिलियन कार उत्पादन गरेको यो कम्पनीले १४७ विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार गर्यो । पछिल्ला केही वर्षयता यो कम्पनीको उत्पादन घटिरहेको छ ।
भक्सवागन संसार प्रशिद्ध जर्मन कार कम्पनी हो । यसको मुख्यालय उल्फ्सबर्ग जर्मनीमा छ । यो कम्पनीको स्थापना २८ मे १९३७ मा भएको हो । यसको सुरुवात जर्मन लेवर फ्रन्ट भनिने नाजी ट्रेड युनियनले गरको थियो ।
अहिलेसम्म विश्वका सर्वाधिक बिक्री भएका १० वटा कारमा तीन वटा त भक्सवागनका मोडलहरु नै छन् ।
भक्सवागन गल्फ, भक्सवागन विटल र भक्सवागन पसाट यो कम्पनीक सर्वाधिक बिक्री भएका र लाेकप्रिय कार हुन् । जर्मन भाषामा भक्सवागनको मतलब जनताको कार हो । सन् २०११ मा अनुसन्धान र विकासमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने कार कम्पनी भक्सवागन नै हो । यो कम्पनीलाई आम जनताको कार बनाएर कारलाई जनताको घरसम्म पु¥याउने श्रेय जान्छ ।
भक्सवागनले सन् २०१८ मा करिब साढे ३ लाख कार उत्पादन गरेको थियो । यी कार बिक्री गरेर भक्सवागनले २३५.८५ विलियन युरो आम्दानी गरेको छ ।
१३. ह्युउन्डेई किया
ह्युउन्डेई मोटर कम्पनीको स्थापना २९ डिसेम्बर १९६७ मा भएको थियो । यो कम्पनीको मुख्य कार्यालय दक्षिण कोरियको राजधानी सिउलमा छ ।
सन् १९९८ मा कोरियाकै अर्को कार कम्पनी किया मोटर्स पनि ह्युउन्डेईमा गाभिएको छ । सन् २०१२ मा कार बिक्रीमा यो कम्पनी संसारभर पाँचौं स्थानमा थियो । ह्युउन्डेईसँग दक्षिण कोरियाकै संसारमा नै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माण संयन्त्र छ । जसबाट एक वर्षमा १६ लाख कार निर्माण हुन्छन् ।
ह्युउन्डेई संसारका १ सय ९३ देशमा लगभग ६ हजार डिलरमार्फत बिक्री हुन्छ । साना कारहरुमा अहिले ह्युउन्डेईले आफ्नाे अधिपत्य जमाएको छ । सान्ट्रो, आई १०, आई २०, ईओन, एस्सेन्ट आदि ह्युउन्डेईका लाेकप्रिय मोडल हुन् ।
कोरिया केन्द्रित यो कम्पनीले सन् २०१८ मा करिब ५ लाख कार बिक्री गर्‍याे ।
पिउजाे फ्रान्सको लाेकप्रिय कार निर्माण कम्पनी हो । यसको सुरुवात सन् १८१० एउटा परिवारिक व्यापारको रुपमा भएको हो । सुरुवातमा यो कफी मिल थियो । सन् १८३० मा यो कम्पनीले साइकल बनाउन सुरु गर्‍यो । सन् १८८२ देखि यो कम्पनीले कार बनाउन सुरु गरेको हो ।
सन् १८९८ देखि यो कम्पनीले माेटरसाइकल समेत बनाउन थाल्यो । यस कम्पनीका अहिले संसारभर २१ फ्याक्ट्री छन् । यो कम्पनीले सानादेखि उच्चस्तरका लक्जरी कार निर्माण गर्छ । पछिल्लो समय यो कम्पनीले विद्युतीय र हाइब्रिड मोटरहरु निर्माण गर्दै आएको छ ।
सानो कम्पनीको रुपमा स्थापित यो कम्पनीको बजार हिस्सा सन् २०१८ मा ९९ प्रतिशले घटेको बताइन्छ । यो कम्पनीले २०२५ सम्म वार्षिक २ मिलियन कार उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको बताइन्छ ।
रेनो पनि फ्रान्सकै कार निर्माण कम्पनी हो । यसको स्थापना २५ फेब्रुअरी १८९९ मा भएको हो । यसको सुरुवात लुइस रेनो, मार्सल रेनो र फर्नान्ड रेनोले गरेका हुन् ।
यसको व्यवसाय विश्वका १ सय १८ देशमा फैलिएको छ । यी कारको मुख्य बजार युरोपेली देश हुन् । जापानको निसान कम्पनीसँग मिलेर विद्युतीय कार निमार्णमा यो कम्पनीले ठूलो लगानी गरेको छ । दुवैको पहलमा छिट्टै नयाँ मोडलका उत्कृट विद्युतीय कारहरु बजारमा आउन लागेको बताइएको छ ।
निसानसँग टाइअप गरिरहेको यो कम्पनीले सन् २०१८ मा करिब ३४ लाख कार उत्पादन गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ४, २०७६, ०१:२०:००